ATN: June 2008
Hasta maana til we meet again
Well findaway to faceanew tomorrow
Hasta maana, say well meet again
Hasta maana, baby, hasta maana, until then
And I cant tell you just how much I miss you
I cant conceal it, dont you see, cant you feel it?
Oh, Ive been dreaming through my lonely past
So come on, now lets try it, I love you, cant deny it
If we cant make it, but just wait and see
Layla, you've got me on my knees, Layla.
အခုတလော သူ တော်တော် စိတ်ရှုပ် စိတ်ညစ်နေလေသည်။ စာရေးဖို့လည်း ခေါင်းထဲမှာ ဘာမှ မပေါ်။ သူ့ဘလော့ပေါ်မှာတော့ သီချင်းတွေပဲ စွတ်တင်ဖြစ်နေသည်။ သီချင်းတွေ နားထောင်ရင်း စိတ် သက်သာမလားလို့ သူ တွေးနေတာလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်။ ခင်ရာမင်ရာ ဘလော့တွေကို နေ့တိုင်းနီးပါး သွားလည်ပြီး စာတွေ ဖတ်ဖြစ်နေသော်လည်း သူ ကွန်မန့် ရေးလိုစိတ် မရှိတော့။ တခါတခါ ကွန်မန့်တွေကလည်း ပြသနာ တက်တတ်သေးသည် မဟုတ်လား။ သူက ရိုးရိုးပဲတွေးပြီး ရိုးရိုးပဲ ရေးခဲ့သည်။ တဘက်သားမှာက နစ်နာသွားတတ်သည်ကို သူမသိ။ သူ ရည်ရွယ်တာက တမျိုး အကျိုး သက်ရောက်သွားတာက တမျိုး ဆိုတော့ သူလည်း လက်တွန့် စိတ်ရှုပ်သွားသည်လေ။ အနည်းဆုံး ဆီပုံးလေးမှာပင် - လာလည်ပါတယ်-တောင် ပြောချင်စိတ် မရှိတော့။
သည် ဘလော်ဂိုစဖီးယားလေးကို သူ ချစ်ပါသည်။ သူ့ ဘ၀ထဲမှာ အတောင် ညောင်းနေအောင် စိတ်ကြိုက် ပျံသန်းလို့ ကောင်းလွန်းလှသည့် တခုတည်းသော ကောင်းကင်လေးမှာ သည် ဘလော်ဂိုစဖီးယား ပါပေ။ အခုတော့ သူ့ အတောင်တွေလည်း ညောင်းချင်နေလေပြီ။ တကယ်တော့ သူ့အတောင်တွေ မညောင်းသေးသော်လည်း သည် ဘလော့ လောကကြီးကို သူ ကျောခိုင်းနေချင်မိသည်။ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပျံသန်းခွင့် မရသည့် လက်တွေ့ လောကကြီးထဲမှာ ၆ ရက်နေခဲ့ပြီး နောက်တရက်မှာ သူ လွတ်လပ်စွာ ပျံသန်းခွင့်ရခဲ့သည့် သည်ကောင်းကင်လေးကို ကျောခိုင်းသွားဖို့ သူ စဉ်းစားနေမိသေးသော်လည်း သူ မသိသော အရာတခုခုက သူ့ကို ကျောခိုင်း မသွားနိုင်အောင် ချည်နှောင်ထားလေသည်။ သူ့ သူငယ်ချင်းတယောက် ပြောခဲ့ဖူးသလို ဘလော်ဂါ ရောင်းရင်းတွေလား။ သူ မသိသေးပါ။
ဘလော်ဂါရောင်းရင်းတွေကတော့ စီးလမ်းလေကြောင်းလွှာတခုမှာ ပျံသန်းရင်း ဆုံတွေ့ခဲ့ကြရသည့် ငှက်များသာ။ ဒါပေသည့် နောက်ဆုံး တချိန်ချိန်မှာတော့ နားခိုရာချင်းက တူကြလေမည် မဟုတ်သည်ကို သူ အလိုလို သိနေခဲ့ဖူးသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အတူပျံသန်းရင်း အုပ်ဖွဲ့ငှက်များ ဖြစ်သွားရသည့် ဘ၀ကိုလည်း သူ နှစ်ခြိုက်နေမိသေးသည်။ အတူ ပျံသန်းရင်း တေးဆိုခဲ့ကြသည့် အချိန်ကာလများက ချစ်စရာ။ နောက်ဆုံးတော့ အချိန်ကာလဆိုတာကလည်း အကန့်အသတ်တခုမှာ ရပ်တန့်သွားရတာပါပဲ၊ စီးလမ်းမဆုံးခင်မှာလည်း မုန်တိုင်းကို တွေ့ရတတ်သေးသည် မဟုတ်လား။ မုန်တိုင်းကြားမှာ အားလုံး တကွဲတပြားစီ ဖြစ်သွားတတ်ကြတာလည်း ဓမ္မတာပါပဲလေ။ မုန်တိုင်းအဆုံးမှာတော့ ထုံးစံအတိုင်း တကိုယ်တော် ပျံသန်းရင်း - ခင်ဝမ်းရဲ့ မုန်တိုင်းစင်ရော်ကို သူ ဆိုငြည်းနေမိပါသည်။
ဘ၀အလှည့် အဆင်မသင့် ငှက်စင်ရော်မှာ
ရုတ်တရက် မုန်တိုင်း ကျရောက်လာ--
ဟို မှောင်မည်းမည်း လျှပ်ပြက်လာ
တကိုယ်ရေ အဖော်ဝေး ကမ်း မမြင်သာ
ပျံသန်းရင်း လေပြင်း ကျော်ဖြတ်ရှာ---
မျှော်လင့်ချက် အနာဂတ် တနေရာ
တည်ငြိမ်တဲ့ အသိတရား ရင်ထဲ တည်ဆောက်ခါ
သူလည်း မုန်တိုင်းစင်ရော်တကောင် ဖြစ်လေခဲ့ပြီလား။ သူ မသိသေးပါ။ သိလည်း မသိချင်ပါပေ။
ဘာပဲပြောပြော သူ့ရင်ထဲမှာ လေးလံနေခဲ့သမျှကို သူ သွန်ချပစ်နိုင်ခဲ့သည့် သည်နေရာလေး သည်ကမ္ဘာလေး သည်ကောင်းကောင်းကင်လေးကိုတော့ သူ ကျောမခိုင်းနိုင်သေးပါ။ ကျောမခိုင်းနိုင်သေးသရွေ့တော့ အတူ ပျံသန်းခဲ့ကြဖူးသည့် အုပ်ဖွဲ့ငှက်များကို လွမ်းတမ်းတရင်း -------
I'd like to dedicate this song to mother earth
Eagles ရဲ့ ကြိုက်မိတဲ့ နောက်ထပ် သီချင်းတပုဒ်ပါ။
ပြောရတာလည်း မောသွားပြီဗျာ။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပဲ ခံစားကြပါတော့။
နောက်ထပ် Eagles သီချင်းတပုဒ်ပါ။ ခေါင်းစဉ်ကတော့ အရက် နာမည်ပါ။ Tequila ဆိုတာကတော့ Mexican အရက်တမျိုးပါ။ အမေရိကန် ဘားတွေမှာတော့ Cocktail ခေါ်တဲ့ စပ်ထားတဲ့ အရက်တွေ အများ ကြီးရှိပါတယ်။ bartender က စပ်ပေးတာပေါ့။ အဲသည်မှာ Tequila Sunrise နဲ့ Tequila Senset ဆိုပြီး ၂ မျိုးရှိတာပေါ့။ အရက်တွေ နောက်ထပ် တခွက်ပြီးတခွက် သောက်ပြီး ရဲဆေးတင်နေတဲ့သူ တယောက်ကို ဒီသီချင်းမှာ တွေ့ ကြမယ်ထင်ပါတယ်။
Eagles သီချင်းတွေထဲက နောက်ထပ် ကျနော် ကြိုက်တဲ့ တပုဒ်ပါ။
သီချင်း တပုဒ်လုံးက စာသားတွေကိုလည်း ကြိုက်တယ်။ Melody ကိုလည်း ကြိုက်တယ်။
And I can't tell you why ဆိုတာလေးကို ကျနော် အကြိုက်ဆုံးပါပဲ။
ဒီသီချင်းက စာသားတွေကိုတော့ မကြိုက်ပါဘူးဗျာ။ ဒါပေမယ့် melody လေးကိုတော့ အတော့်ကို ကြိုက်တာ။ ဒါနဲ့ပဲ Eagles သီချင်းတွေထဲမှာ ကျနော် ကြိုက်တဲ့ တပုဒ်ထဲ ပါသွားတယ်။
against your skin it's so brown
Ah but she can't take you anyway
ကျနော်ကြိုက်တဲ့ Eagles သီချင်းတွေထဲက ဒီသီချင်းလေးကိုလည်း တော်တော် ကြိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ချစ်သူ နှစ်ဦးပေမယ့် မတူတာတွေလည်း ရှိကြမှာပေါ့နော။ တယောက်နဲ့ တယောက်လည်း နာကျင်အောင် မရည်ရွယ်ပဲလဲ လုပ်မိတတ်ကြတယ်လေ ဘ၀ထဲမှာ။ ဒါပေမယ့် တယောက်ကို တယောက်က အကောင်းဆုံး အချစ်တွေ ပေးခဲ့ကြတာပါပဲ။ ရမရ-ဆိုတာကတော့ .........
ကျနော် ကြိုက်တဲ့ Rock Band တွေထဲမှာ Eagles ကတော့ အကြိုက်ဆုံးပါပဲ။ သူတို့ကတော့ သူတို့ကို California Rock လို့ပဲ ခေါ်ပါလို့ ပြောထားခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ သီချင်းတွေက Classic Rock, Slow Rock, Country Rock, Soft Rock တွေပဲ များပါတယ်။ ကျနော်က အဲလိုမျိုး အပျော့စားရော့ခ်တွေကိုပဲ ကြိုက်လို့လားတော့ မသိပါဘူး။ Eagles ကတော့ ကျနော့်ရဲ့ Favorite Rock Band on This Earth ပါပဲ။ သူတို့ သီချင်းတွေထဲမှာ Hotel California ကတော့ ကျနော့် အသည်းစွဲပါ။ တကယ်ကတော့ ဒီသီချင်းက မူးယစ်ဆေးဝါးဆန့်ကျင်ရေး သီချင်းတပုဒ်ပါ။ စာသားတွေကို သေချာ ဖတ်ကြည့်ကြည့်ကြပါ။
စာသားထဲက တချို့စကားလုံးတွေကိုတော့ နည်းနည်းလောက် ရှင်းပြရမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
သီချင်းရဲ့ ပထမအပိုဒ်မှာပါတဲ့ Colitas ဆိုတာက California မြောက်ပိုင်းမှာ ပေါက်တဲ့ အပင်တမျိုးပါ။ California မှာ ဆေးခြောက်ပင်က အဖူးကို Colitas လို့လည်း ဗန်းစကားနဲ့ ခေါ်ကြတယ်။ ပူပူနွေးနွေး ဆေးခြောက်အနံ့လေးတွေ ရနေတယ်လို့ ပြောတာပါ။
ဒုတိယအပိုဒ်မှာပါတဲ့ tiffany-twisted ကတော့ ရှင်းပြရမှာ နည်းနည်း ရှည်ပါတယ်။ Tiffany & Co., ဆိုတဲ့ လက်ဝတ်ရတနာ ကုမ္ပဏီတခု ရှိပါတယ်။ ၁၉၈၀ ၀န်းကျင်က လူချမ်းသာတွေကြားထဲမှာ နံမည်ကြီးပေါ့။ ချမ်းသာတဲ့ သူတွေပဲ ၀ယ်ဝတ်နိုင် သုံးနိုင်တာပါ။ အဲလိုပဲ သိပ်ချောလှတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို အဲဒီခေတ်တုန်းကလည်း tiffany လို့ ဗန်းစကားနဲ့ ခေါ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ လူချမ်းသာတွေပဲ အနားကပ်နိုင်မှာ မို့လို့ပါ။ နောက်တခု captain ကတော့ အမေရိကားက bar တွေမှာ bartender ကို Doc, Chief, Captain စသည် ဖြင့် ခေါ်ကြလေ့ရှိပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ် ကတော့ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူကို ဗန်းစကားနဲ့ ပြောတာပါ။ အရက်တွေ အကြောင်းကို bartender က တခြားလူတွေထက် ပိုသိတယ် မဟုတ်လား။ spirit ကတော့ အဓိပ္ပါယ် ၂ မျိုးထွက်ပါတယ်။ တခုက အရက်ပါ၊ နောက်တခုကတော့ စိတ်ဓါတ်ပေါ့။ ၁၉၆၉ ကတည်းက စပြီး ဒီလို အရက်မျိုး မရတော့ဘူးလို့ ပြောတာ ဖြစ်နိုင်သလို ဒီလိုမျိုး စိတ်အနေအထားလည်း မရတော့ဘူးလို့လည်း ပြောတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တတိယပိုဒ်မှာပါတဲ့ the feast ဆိုတာကတော့ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေကို အတူတကွ သောက်သုံးကြ၊ ထိုးကြတာကို ပြောတာပါ။ steely knives ဆိုတာကတော့ ဆေးထိုးအပ်တွေကို ပြောတာပါ။ the beast ကတော့ အားလုံးလည်း ခန့်မှန်းမိကြမှာပါ - ဘိန်းဖြူကို ပြောနေတာပါ။
သီချင်းတပုဒ်လုံးရဲ့ အချုပ်ကတော့ သူ့ ဘ၀ကြီးကို ကန္တာရ လမ်းမကြီးပေါ်မှာ မောင်းနှင် နေရသလိုမျိုး ခြောက်သွေ့ နေတယ်လို့ ထင်နေတဲ့ ငတိတကောင်က ဟိုတယ်လို့ တင်စားထားတဲ့ နေရာတခုမှာ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေ သွားသုံးစွဲပြီး စိုပြေသွားလိမ့်မယ်လို့ သူ ထင်နေခဲ့တာတွေကနေ ထွက်ပြေးဖို့ ကြိုးစားတဲ့ အကြောင်းပါ။
ဒါကလည်း ကျနော် ကြိုက်တဲ့ Eric Clapton ရဲ့ သီချင်းတွေထဲက အကြိုက်ဆုံး သီချင်းတပုဒ်ပါ။ သူ့ရဲ့ ၄-နှစ်သားလေး နယူးယောက်မြို့မှာ ၅၃-ထပ်မြင့်တဲ့ ပြူတင်းပေါက်ကနေ ပြုတ်ကျပြီး ဆုံးပါးသွားတော့ စတူဒီယိုမှာ သူ ကျခဲ့တဲ့ မျက်ရည်တွေပါ။ ဒီမျက်ရည်တွေကတော့ ဘယ်တော့မှ ခမ်းခြောက် သွားလိမ့်မယ်လို့ ကျနော် မထင်ဘူး။ Imagine လိုပဲ ဘာသာပြန်စရာကို မလိုအောင် အလွန်လှပရိုးရှင်းလွန်းတဲ့ ကြေကွဲစရာ သီချင်းတပုဒ်ပါပဲ။
သီချင်းတကာတွေထဲမှာ ကျနော့်ရဲ့ အကြိုက်နှစ်သက်ဆုံးသော တခုတည်းသော သီချင်း ဖြစ်ပါတယ်။ Lyrics ကိုလည်း ဖတ်ကြည့်ကြပါ။ ဘာသာပြန်စရာကို မလိုတဲ့ အလွန် ရိုးရှင်း လှပလွန်းတဲ့ သီချင်း တပုဒ်ပါ။ ဒီသီချင်းကြောင့်ပဲ John Lennon အသတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒီ သီချင်းထဲမှာ ပါတဲ့ အခန်းက တခန်းလုံး အဖြူရောင် သုတ်ထားတယ်။ ပြူတင်းတံခါးတွေကိုတောင် အဖြူရောင် ကန့်လန့်ကာတွေနဲ့ ကာထားတာပါ။ အဲဒီကန့်လန့်ကာတွေကိုတောင် Yoko Ono က အခန်းထဲကို အပြင်က အလင်းရောင်တွေ ၀င်လာအောင် သွားဖွင့်နေတာကို တွေ့ကြရမှာပါ။ အဖြူရောင်ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ကျနော် ရှင်းပြစရာ မလိုအောင် အားလုံး သိကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဘ၀ထဲမှာ တခါတခါတော့လည်း ဒီလို အဖြူရောင် အခန်းထဲကိုတောင် အလင်းတွေ ၀င်လာအောင် အဖြူရောင် ကန်လန့်ကာတွေကို ဖွင့်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီ သီချင်းလေးရဲ့ အဆုံးမှာ John Lennon နဲ့ Yoko Ono တို့ တယောက်နဲ့တယောက် ကြည့်လိုက်ကြတဲ့အကြည့်က အရမ်း အဓိပ္ပါယ်ရှိပါတယ်။ အသေးစိပ်ကလေးတွေကို ကြည့်ပြီး ခံစားကြည့်ကြပေါ့ဗျာ။
ဘာရယ်လို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော် ကြိုက်မိတဲ့ သီချင်းလေးတွေ တီးလုံးလေးတွေကို အားလုံးကို မျှဝေချင်တာလေးတခုပါပဲ။ အခု Cannon Rock ကတော့ မူရင်းက Johann Pachelbel ရဲ့ Chamber Music တခုဖြစ်တဲ့ Cannon in D ပါ။ အဲဒါကို ထိုင်ဝမ်က ဂစ်တာသမားတယောက်ဖြစ်တဲ့ Jerry C. က Rock ပုံစံနဲ့ ပြန်တီးထားတာပါ။ သူတီးတုန်းကတော့ လူတွေ သိပ်မသိကြပါဘူး။ နောက်တော့ YouTube မှာ FunTwo ဆိုတဲ့ ကိုရီးယားက ဂစ်တာသမားတယောက်က ပြန်တီးလိုက်တော့ YouTube မှာ လူအကြည့်ဆုံး Vid တခုဖြစ်သွားပြီးတော့ CNN က သတင်းမှာတောင် ပါခဲ့ဖူးပါတယ်။ သူ့ကို အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ တောင်ကိုးရီးယားသံရုံးက ဧည့်ခံပွဲမှာတောင် ခေါ်တီးခိုင်းတဲ့ အထိ ထင်ပေါ်လို့ စင်တော်ပေါ်ရောက်ခဲ့သူ တဦးပါ။
ဒီ Vid ကတော့ Jerry C. ရဲ့ မူရင်း Cannon Rock ပါ။
ဒါကတော့ FunTwo ရဲ့ လက်သံပါ။ ယနေ့ထက်ထိ သူ့ Vid ကို YouTube မှာ တက်ကြည့်ခဲ့သူအားလုံးပေါင်း ၄၅ သန်းကျော်နေပါပြီ။ သူ့ လက်သံက Jerry C. ထက်လည်း ပိုပိရိသပ်ရပ်ပါတယ်။
ဒီ Vid ကတော့ ပြင်သစ်က ဂစ်တာသမားတယောက်ဖြစ်တဲ့ Mattrach လက်သံပါ။ သူလည်း ကောင်းတာပါပဲ။
ဒါကတော့ Mattrach ရဲ့ New Version of Cannon Rock ပါ။
YouTube ပေါ်မှာတော့ Cannon Rock ကို တီးခတ်ပြနေသူ ဂစ်တာသမားတွေ အများကြီးပါပဲ။ Version အသစ်တွေလည်း အများကြီးပါပဲ။ ကျနော့်အတွက်တော့ အပေါ်က ဂစ်တာသမား ၃ ယောက်က အကောင်းဆုံးတွေလို့ ခံစားမိပါတယ်။
ဒီ သီချင်းကတော့ Timothy B. Schmit (the Bass Player of Eagles) ရဲ့ သီချင်းတွေထဲက ကျနော် အကြိုက်ဆုံး သီချင်းပါ။ သူ့အသံအေးအေးလေးနဲ့ သိပ်ကိုလိုက်ဖက်တဲ့ သီချင်းပါပဲ။ စာသားတွေကိုလည်း အရမ်းကြိုက်တယ်။
Now you’ve given me the will to survive ဆိုတဲ့ အပိုဒ်လေး။
Now I’ve found you There’s no more emptiness inside ဆိုတဲ့အပိုဒ်လေး။
အဲဒီစာပိုဒ်လေးတွေကို ရင်နဲ့အမျှ ခံစားရတယ်။
ယခုတလော ဘလော့လောကကြီးထဲ တယောက်နဲ့ တယောက်- တအုပ်နဲ့ တအုပ် ဆဲကြ၊ ဆိုကြ၊ တိုက်ကြ ခိုက်ကြ။ ပုတ်ကြ၊ ခတ်ကြ။ ငြင်းကြ၊ ခုန်ကြ။ ဆော်ကြ၊ နှက်ကြ။ သူ့အတွက်တော့ မြင်တွေ့ ကြားသိနေရသမျှ တချက်မှ စိတ်ချမ်းသာစရာမရှိ။ ကြားထဲက နအဖ ငတိတွေအတွက် ၀မ်းသာစရာ အတိတွေသာ ဖြစ်ကြတော့မည်။
နာဂစ်စ်ကြောင့် ပြည်သူတွေ အတိဒုက္ခရောက်ကြရသည်အပေါ် ကိုယ့်အတွက်ကိုယ် အမြတ်ထုတ်ခဲ့ကြသူတွေလည်း ရှိသည်။ မည်သို့ဆိုစေ ဒါကိုပင် သမိုင်းက မှတ်တမ်းတင်ထားမည်သာ။
လူဆိုသည်က ကိုယ့်သမိုင်းကိုယ် ရေးကြရသည် မဟုတ်လား။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ သမိုင်းကို သူ့အဖိုးဖြစ်သူ ဗိုလ်မင်းရောင်က ရေးပေးခဲ့ခြင်း မဟုတ်ပါပေ။ ဗိုလ်ချုပ်ကိုယ်တိုင် အသက်ပေးပြီး ရေးခဲ့ခြင်းပါပေ။ ဒါပေသည့် သူ့သမိုင်းက လှပနေခဲ့သည်။
ဗိုလ်နေ၀င်းကရော။ ဗိုလ်နေ၀င်း သမိုင်းကိုလည်း သူ့အဖေ ဦးဖိုးခက ရေးခဲ့သည် မဟုတ်ချေ။ သူကိုယ်တိုင် နေ့ရက်များစွာ အစဉ်အဆက် ရေးသားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်လေ။ သူ့ သမိုင်းကတော့ ရိုင်းစိုင်းနေခဲ့သည်မှာ ပြောစရာ မရှိတော့။
သူ့သမိုင်းကိုသူ လှလှပပ ရေးခဲ့သည့်အတွက်လည်း ဗိုလ်ချုပ်ကို မနာလို မရှုစိမ့်သူများက ငွေကြေးရုပ်ပုံ မျိုးစုံပေါ်က သူ့ ပုံရိပ်များကို ဖယ်ရှား သိမ်းဖျက်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် သမိုင်းကို ဖျောက်ဖျက် နိုင်မည်ဟု ထင်ခဲ့ ကြဖူးသည်။ မှားလေစွ။
သမိုင်းသည် ကဗျာတပုဒ် မဟုတ်။ သမိုင်းသည် စာတပုဒ် မဟုတ်။ သမိုင်းဆိုသည်မှာ နေ့စဉ်ရက်ဆက် ဖြည့်စွက်ခဲ့ရသည့် ကွက်လပ်များသာ။ တခါတရံမှာ သမိုင်းဆိုသည်မှာ အသက်ကိုပင် ဖြည့်စွက်ရတတ်သည့် ကွက်လပ် တခုပါပေ။
ထိုသမိုင်းကွက်လပ်အတွက် ကိုယ့်အသက်ကိုယ်ပင် ဖြည့်စွက်ခဲ့သည်ဆိုစေဦး လှပသည့် သမိုင်းနှင့် အရုပ်ဆိုး အကျည်းတန်သော သမိုင်း ဟူ၍ ကြွဲပားသွားခဲ့သည် မဟုတ်လော။
သမိုင်းထဲမှ အဖြစ်အပျက်များသည်လည်း စစ်တုရင် ကစားသလိုပါပေ။ လူတချို့မှာ စစ်တုရင်ကစားပွဲတွင် အကွက်ပေါင်း ထောင်ချီ ကစားခဲ့သော်လည်း အနိုင် အရှုံး မသိရခဲ့သေး။ သို့သော်လည်း တချို့မှာမူ တကွက်ထဲ ကစားပြီး တပွဲလုံး ရှုံးခဲ့လေသည်။
သူ့အနေနဲ့ကတော့ - ဗမာ ဘလော်ဂါအားလုံးကို သမိုင်းရေးနေသူများချည်းသာ- ဟု အသိအမှတ် ပြုထားသည်လေ။
သမိုင်းဆိုသည်ကလည်း ဘက်နှစ်ဖက် အမြဲတမ်း ရှိခဲ့သည်ဆိုတော့ အနိုင်ကျင့်သူများရဲ့သမိုင်းနဲ့ အနိုင်ကျင့်ခံရသူများရဲ့သမိုင်းသာ ရှိလေသည်။
သည်မှာ လေးလေးနက်နက် ပြောရလျင် ဗမာဘလော်ဂါအားလုံးသည် တဖက်ဖက်ကို ရပ်တည်နေသူများသာ ဖြစ်ချေသည်။ တနည်းပြောရလျင် အနိုင်ကျင့်သူများဖက်မှ ရပ်တည်နေသော ဗမာဘလော်ဂါများနဲ့ အနိုင်ကျင့်ခံနေရသူများဖက်မှ ရပ်တည်နေသော ဗမာဘလော်ဂါများ ဟူ၍သာ ခွဲခြားနိုင်လေသည်။
ဖြစ်နိုင်ချေတခု ရှိနေသေးသည်က မည်သည့်ဖက်ကမျှ မရပ်သည့် ဗမာဘလော်ဂါများ။ ယနေ့ထက်ထိ သူကတော့ မတွေ့ ဖူးသေးပါ။
သူ့အနေနဲ့ ပြောစရာ စကားတခုရှိပါသည်။ ဖက်တူနေသူအချင်းချင်းလည်း တခါတရံ ကွဲလွဲခြင်းများ၊ မကိုက်ညီမှုများ၊ သဘောမတွေ့မှုများ- စသည်ဖြင့် ရှိနေနိုင်ပါသည်။
သို့ပေသည့် ဤအရာအားလုံးက မိတ်ဖက် ပဋိပက္ခများသာ ဖြစ်ပါသည်။ အေးချမ်းစွာ ဖြေရှင်းခြင်းဖြင့် အကျိုးရှိသော ရလာဒ်များသာ ထွက်ပေါ်လာမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။
ထိုသို့ မဟုတ်ပဲ ကိုယ့် စိတ်ဆန္ဒများအလျောက် ကောက်ကောက်ပါအောင် လိုက်ခဲ့ကြလျင်ဖြင့် ------
သူကတော့ အငြင်းပွားနေမှုများ အားလုံးအတွက် ရွှေပြည်အေးတရား ဟောကြားနေခြင်းလည်း မဟုတ်ပါ။
သို့သော်လည်း - ဘက်တူသည့် ဗမာ ဘလော်ဂါများအတွင်း တည်ငြိမ်အေးချမ်း စည်းလုံးမှုကို သူ အပြင်းအထန် လိုလားနေပါသည်။
သည့်အတွက်လည်း လွန်ခဲ့သော အနှစ် ၄၀ ခန့်က သူကြားခဲ့ဖူးသည့် သီချင်း ၂ ပုဒ်အား မျှဝေချင်မိပါပေသည်။
သို့သော်လည်း အနှစ် ၄၀ ကျော်လာသည့်အတွက် သီချင်း စာသားများကို သူအတိအကျ မမှတ်မိတော့ပါချေ။
ထို့အတူ ဂီတစာဆိုကိုသော်လည်းကောင်း၊ အဆိုရှင်များကိုသော်လည်းကောင်း သူ အတိအကျ မမှတ်မိတော့ပါချေ။ သိရှိသူများက သူ့အား တည့်မတ်ပေးကြပါကုန်။
အို--- ရွှေစင်မြသား ဖုန်းကွယ်ထားသလို
ပကာသနကြောင့် လှပမှု အယောင်ဆောင်
အရာရာ အစစ လှပစေခြင်း ချစ်စရာ အပြုံးသည်သာ
အထီးကျန် အရုပ်ဆိုး ဆိုရိုးမလိုပါ
နွယ်နီသက ပန်းအလှ ထိပ်ခေါင်ပမာ
အပြုံးနဲ့ ဖုံးကွယ်ကာ အမုန်းကို ရှောင်ကြပါ။
ခင်မင်စရာ အပြုံးသည်သာ လောက ဤကမ္ဘာ
လူသားတိုင်းရဲ့ အသည်းနှလုံးမှာ ပုလဲကုံးပမာ အမြဲသုံးပါ
ချစ်ရင်လည်းပြုံးပါ (အများ- မုန်းရင်လည်း ပြုံးပါ)
အပြုံးနဲ့သာ ကာကွယ်မှာ ကြည်နူးနှစ်သိမ့် ဘ၀င်ငြိမ့်စေရာ
ဆန္ဒအဖြာဖြာ (အများ- ဆန္ဒအဖြာဖြာ)
လူတို့နှလုံးသား အမုန်းမပွားကြစေ မေတ္တာဆွတ်ဖြန်း ချစ်ခန်းလှိုင်ကြွယ်
အကြင်နာတရားတွေ ထားမှ စိတ်ထားမြတ်မယ်
အမြဲသာတွေး တွေးဆဖွယ် အသည်းမှာ အေး အေးမြဖွယ်
စေတနာတွေ မိုးစွေရွာ ဖြိုးဝေပါကွယ်
နှလုံးသားဝယ် အမုန်းတရားဖယ် အပြုံးများ ကြွယ်ကြစေဖွယ်။
စိန်ရွှေရတနာ နီလာပုလဲ သီကာဆွဲမှ လှမယ်မထင်တယ်
အလှဆိုတာ အစဉ်မမြဲ သင်္ခါရပဲကွယ်
ရိုးသား သိမ်မွေ့ သဘောက ဖြူစင်
အစဉ်အမြဲဘ၀ လှပရေးအတွက် ရင်ထဲက အလှသာတွေးကွယ်
မှတ်ချက်၊ ၊ ကိုတောင်ငူ ထောက်ပြလို့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ အဖိုးကို ဗိုလ်လရောင်လို့ ကျနော် မှားယွင်းရေးသား ထားမိတာကို ဗိုလ်မင်းရောင်လို့ ပြန်ပြင်လိုက်ရပါတယ်။ ကျနော့်အမှားကို ထောက်ပြတဲ့ ကိုတောင်ငူကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းလည်း ဒီနေရာမှာ ဖော်ပြပါရစေခင်ဗျား။
ဒီပို့စ်ကို အရမ်းသဘောကျလို့ My Little World ဘလော့ကနေ ခွင့်တောင်းပြီး ပြန်လည် ဖော်ပြပေးတာပါ။
ကျွန်မ သဘောကျ နှစ်သက်တဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ပါ။ တခါတလေ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ရိုက်ခတ်မှု့ တွေကြောင့် စိတ်ရိုင်းတွေ ၀င်လာတဲ့ အခါတိုင်းမှာ ဒီကဗျာကို သတိတရ ပြန်ဖတ်မိတယ်။ ဒီကဗျာလေးရဲ့ နောက်ဆုံး စာပိုဒ်မှာ မာသားထရီစာဟာ ရဲ့ သူရဲ့ ယုံကြည်မှု့အတိုင်း You and God လို့ရေးသားထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကဗျာလေး ဖတ်တိုင်း အဲ့ဒီနေရာမှာ You and Yourself လို့ ပဲ ကျွန်မ အမြဲ ပြောင်းဖတ်မိတယ်။ ဘာတွေ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်နေပါစေ မပြောင်းလဲပဲ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားကြရမယ်။
If you are kind, People may accuse you of selfish, motives;
ဒီအပေါ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ကျွန်မ နဲ့ ရင်းနှီးနေတဲ့ ကဗျာလေးဟာ မားသားထရီစာ ပြန်လည် ရေးသားထားတဲ့ Version ပါ။ အဲ့ဒီ ကဗျာရဲ့ မူရင်း ကဗျာနာမည်ဟာ The Paradoxical Commandments ဖြစ်ပြီး ရေးသားသူဟာ Dr. Kent M. Keith လို့သိရပါတယ်။ အဲဒီကဗျာ လေးအကြောင်း သိချင်တယ်ဆိုရင် ဒီမှာ နဲ့မူရင်းဗားရှင်းကို ဖတ်ကြည့်ချင်တယ်ဆို ဒီမှာ ဖတ်လို့ ရပါတယ်။
Other Source: Mother Treasa : Do It Anyway
သည်လိုနဲ့ ဗီဒီယိုကို သူ ဆက်ကြည့်ဖြစ်နေသည်။
ဗွီဒီယို ကင်မရာက အမေ့ အခေါင်းဆီကို ပြန်လှည့် လာနေသည်။ ပြီးတော့ အမေ့အခေါင်းထဲမှာ ထည့်ထားသည့် သူ့ ညီမလေး ရေးထားသည့် စာကို သူ တွေ့နေရလေသည်။
တဆက်တည်း နောက် စာတခုကိုလည်း သူတွေ့လိုက်ရသည်။
အစ်မ တနေရာရာမှာ ရှိနေမယ်လို့
ထောင်တွင်းမှာ စစ်အာဏာရှင်များ၏ နှိပ်စက် ညှဉ်းပမ်း တရားမဲ့ သတ်ဖြတ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသည့် ခရမ်းမြို့နယ် ဒီ-ချုပ်အမတ်ဖြစ်သည့် ဦးတင်မောင်ဝင်း၏ ဇနီးသည်က အမေ့အတွက် ရေးခဲ့သည့် စာပေ။
ဦးတင်မောင်ဝင်းကို ထောင်ထဲမှာ ရိုက်နှက် ညှဉ်းပမ်းပြီး လက်လွန်သွားသည့်အခါ ကင်ဆာနှင့် အသက်ဆုံးရသယောင် စစ်အာဏာရှင်များက သတင်းထုတ်ပြန်သည်လေ။
သည်အခါမှာ ဒေါ်ကြူကြူက သူမ၏ ခင်ပွန်းဈာပနမှာ ကြွေးကြော်ခဲ့ဖူးသည်။ သူမရင်နှင့်ရင်းပြီး ထွက်ပေါ်လာသည့် ကြွေးကြော်သံပါပေ။
သူ့ကိုလည်း အားလုံးက သံယောင် လိုက်ခွင့် ပြုပါ။
လူကို သတ်တဲ့ ကင်ဆာ
သည်လိုနဲ့ပဲ ပုန်ကန်ဆန့်ကျင်မှုကို ပြုခဲ့ကြသူတိုင်းနဲ့ ထိုသို့ ပြုခဲ့ကြသူများ၏ မိသားစုဝင်တိုင်းမှာ နာကျည်းစရာ ခါးသည်းစရာများက တခုမဟုတ် တခု ပြည့်နှက်လို့ နေလေတော့သည်။ သို့သော်လည်း သည်လူတွေ အားလုံးက တဦးအတွက် တဦး ရပ်တည် ပေးခဲ့ကြသည်။ တဦးကိုတဦး ကာကွယ်ပေးခဲ့ကြသည်။ တဦးကိုတဦး စာနာ နားလည်ပေးခဲ့ကြသည်လေ။
ဒါကို ပြန်တွေးမိတော့လည်း သူ့ လက်မောင်းရင်းထဲကတဆင့် သူ မပြောပြနိုင်သော အင်အားတွေ စီးဆင်း ၀င်ရောက် လာသည်ကို သူ ခံစားရ သည်လေ။
ငါတို့ဟာ အထီးကျန်သူတွေ မဟုတ်ဘူး၊
ဗွီဒီယိုကို သူ ဆက်ကြည့်မိလေလေ သူ့မှာ ၀မ်းသာဝမ်းနည်း ခံစားရလေလေ ဖြစ်လေနေတော့သည်။
အနှစ် ၂၀ ကျော် သူ မတွေ့ခဲ့ရသော သူ့ အဒေါ် ၂ ယောက်ကို သူတွေ့နေရသည်။ သည် အဒေါ် ၂ ယောက်က သူ့ရဲ့ ဒုတိယ အမေတွေဆိုလည်း ဟုတ်သည်။ သူတို့လက်ပေါ်မှာ သူ ကြီးပြင်းလာခဲ့ရသည် မဟုတ်လား။ မွေးကတည်းက အဖေကို မမြင်ဘူးခဲ့သော သည်တူလေးကို သည် အဒေါ် ၂ ယောက်က ပြုစု ပျိုးထောင် ပေးခဲ့သည်။ သူ့ မိခင် ထောင်ထဲမှ ရေးခဲ့သည့် စာတွေ ကဗျာတွေကိုတောင် သူ ဖတ်တတ်နိုင်အောင် သည် အဒေါ် ၂ ယောက်က သူ့ ကို စာတွေ သင်ပေးခဲ့သည် မဟုတ်လား။
အခုတော့ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်မှ အမေ့ဈာပနမှာ သူ့ ဒုတိယမိခင်တွေ ဖြစ်သော သည်အဒေါ် ၂ ယောက်ကို (Live) လှုပ်ရှား အသက်ဝင်လျက် တွေ့ရတော့ သူ အတော့်ကို ၀မ်းသာဝမ်းနည်း ခံစားနေရသည်။
သူတို့လည်း အိုမင်းနေပေပြီ၊ အမေ့ အခေါင်းဘေးမှာ ရပ်ကြည့်ရင်း ငိုနေကြသည်။ သူလည်း လိုက် ငိုနေမိသည်။
သည်လိုနဲ့ ဘ၀ဆိုတာကတော့ သည်လိုပါပဲလို့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် သူ ပြန် ဖြေသိမ့်နေမိသည်။ မတူတဲ့ ဘ၀တွေမှာ မတူတာတွေ ဖြစ်ကြတာပေါ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိတ်ခွန်အား နည်းသွားအောင်တော့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် မလုပ်နဲ့-လို့ သူ့ဘာသာသူ ပြန်အားပေးရင်း ဗွီဒီယိုကို ဆက် ကြည့်နေမိသည်။
သည်လိုနဲ့ ဗွီဒီယို တနေရာမှာ သူ့ညီမလေးရဲ့ သမီးများဖြစ်သည့် သူ့ တူမလေး ၃ ယောက်ရဲ့ ဝေဒနာကို သူ တွေ့နေရသည်။ သမီးတို့ရေ ဘ၀ဆိုတာ ဒီလိုပါပဲ-လို့ သူ အားပေးချင်သည်။ အဲသည် အခွင့်အရေးကတော့ သူ့မှာ မရှိပါပေ။
ကျနော်လည်း တခြားဘလော်ဂါတွေလိုပါပဲဗျာ။ ကိုယ့်ဘလော့လေးကို တခြားဘလော့တွေနဲ့မတူ တမူထူးခြားနေစေချင်တယ်။ ကိုယ့်ဘလော့လေးကို သပ်သပ်ရပ်ရပ် လှလှပပ ဖြစ်နေစေချင်တယ်။ Appearance တခုတည်းကို ပြောနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ဘလော့ရဲ့ ဦးတည်ရာကိုပါ ဆိုလိုတာပါ။
ဒါပေမယ့် ဘလော့လေးကို အမြင်မှာ သပ်သပ်ရပ်ရပ် လှလှပပ ဖြစ်စေဖို့ကလည်း နည်းပညာတွေက လိုနေပါသေးတယ်။ အဲဒါတွေကို ဆည်းပူးရင်း အခက်အခဲတွေကလည်း ကြုံရသေးတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော့် ဘလော့လေးကို ကြည့်လို့ ရှုလို့ ပိုကောင်းသွားအောင် ကိုယ့်ဘာသာလုပ်ရင်းနဲ့ နည်းပညာ အကန့်အသတ်တချို့တွေ ရှိနေတာကိုလည်း သတိထားမိ သွားပါသေးတယ်။
ကျနော်က အဲဒီ အကန့်အသတ်တွေကို မကျော်လွှားနိုင်ပါဘူး။ ကျော်လွှားပေးနိုင်တဲ့ ဆရာသမားများကို လေ့လာ ဆည်းပူး ရပါတယ်။ ဘယ်သူမဆို ဆရာမပြ ငါးပိဖုတ်တောင် နည်းမကျ-လို့ ဆိုရိုးရှိတယ် မဟုတ်လား။ ဒါနဲ့ ဆရာသမားများရဲ့ သင်ပြချက်တွေနဲ့ ကျနော့် ဘလော့ကို Modify လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
တော်တော်များများ ကျနော့် ဘလော့မှာ ပြောင်းသွားခဲ့တယ်။ အဲဒါတွေကတော့ အဲဒီဆရာသမားများရဲ့ ကျေးဇူးပါ။